Kubata uye mishonga: Pane nhumbu mishonga yakachengeteka here? - Zvinodhaka Info | Chikunguru 2021
Wellness Nharaunda, Wellness Kambani, Nhau Nhau, Wellness Zvinodhaka Vs. Shamwari Dhinda Hutano Dzidzo, Nhau Checkout Info Info, Nhau Nharaunda Kambani Kambani, Info Info Hutano Dzidzo, Hutano Nharaunda, Kambani Info Info, Hutano Dzidzo
Kuru >> Zvinodhaka Info >> Izvo zvaunofanira kuziva nezvekutora mushonga uine nhumbu
Izvo zvaunofanira kuziva nezvekutora mushonga uine nhumbu
Zvinodhaka Info Maternal Matters
Kubata kunogona kunzwa senge hombe runyorwa rwevasingaiti. Usadya chizi chinyoro - kana nyama dzekudyira. Usatora mushonga unotonhora. Uye apo uchienda pasina muripo kwemwedzi mipfumbamwe unonzwika zvakanaka, chokwadi chiripo pfumbamwe pavakadzi gumi kuU.S. vanotora mishonga pane imwe nguva panguva yekuzvitakura kwavo.
Kuwana mishonga yekuzvitakura-yakachengeteka haisi nyore nguva dzose-kunyanya kana uchigara uchitora mishonga yehutano hwepfungwa kana mamiriro akambovapo. Iyo yakakosha, inofanirwa-kuva nehurukuro nemubatsiri wako wehutano nekukurumidza paunongoziva kuti uri kutarisira.
Kune here nhumbu-yakachengeteka mishonga?
Zvese muhupenyu ndezvehuwandu hwengozi-yekubatsira, anodaro Felice Gersh, MD, muvambi uye director we Inobatanidza Medical Boka reIrvine uye munyori we PCOS SOS: Gynecologist's Lifeline kune Chaiwo Kudzorera Rwiyo Rwako, Mahormone, uye Mufaro . Kana mukadzi aine hutachiona kana chirwere chinotyisa, panogona kunge paine mishonga yaanoda zvachose. Iwe unofanirwa kuita zvinokanganisa dzimwe nguva.
Mune mamwe mazwi, kugona kweimwe mishonga (yakadai semushonga weropa) kuchengetedza amai-kuva-vane hutano mukati mekubata kwavo pamuviri kunogona kupfuura njodzi diki yainopa kumucheche ari kukura. Iyi ongororo inofungidzirwa newe nachiremba wako pane imwe nyaya-ne-kesi, uye zvakakosha kuti unzwisise njodzi dzese dzinogona kuvepo.
maitiro ekudzikisa BP pakarepo nhasi
Kana zvasvika pamabatirwo anoita mushonga fetus, nguva chinhu chakakura kwazvo. Kazhinji, yekutanga trimester ndiyo yakanyanya njodzi nekuti ndiyo nguva iyo fetus iri panjodzi, anodaro Ceppie Merry, Ph.D., chiremba wezvemishonga uye munyori Hutano Asi Wakangwara . Fetus iri kukura ine itsvo isina kusimba nehuropa, uye haigone kubata zvinodhaka nenzira imwechete inogona kuita vanhu vakuru. Iwe unofanirwa kuve wakangwarira mumwedzi wega wega wega, zvakadaro, uye kunyangwe mune inonzi 'yechina trimester,' sezvo mimwe mishonga inogona kupfuudzwa kuburikidza nemukaka wemukaka.
RELATED: Chii chaizvo chinoita kuti ive mukaka wemukaka?
Mhando dzemishonga yaunotora inoitawo musiyano mukuru mukudzivirira kwe 'fetus'. Mimwe mirau — uye mamwe marondedzero - anokonzera njodzi hombe pane mamwe. Semuenzaniso, valproic acid (Depakote) yakaratidza a njodzi yakakura yekukonzera kusakwana kwekuzvarwa kwemuviri uye nekuziva / hunhu hutano nyaya muvacheche vari mudumbu zvichienzaniswa nemimwe mishonga yekudzivirira pfari. Nepo ichisarudza serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), iyo inoshandiswa kurapa kushushikana, inogona kuwedzera njodzi yemwana yeanaonatal adaptation syndrome , simba rekumisa mushonga panguva yepamuviri pahutano hwepfungwa hwaamai zvinogona kuita kuti zvimuomere kuwana rubatsiro rwepamberi pekusununguka. Zvekare, inodzokera kune yekuongorora-kubatsirwa kuongorora pakati pako nachiremba wako.
Ndeapi mishonga akachengeteka kutora panguva yepamuviri?
Kana iwe uchitsvaga nhumbu yakachengeteka mishonga yemazita, wako wekuchengeta hutano mupi ndiye akanyanya sosi yekuwana ruzivo. Nekudaro, kune zvimwe izvo vatapi vazhinji vanobvumirana ndizvo njodzi kutora zvine mwero:
Zvekurwadziwa: Tylenol (acetaminophen)
Zvekudzivirira: Metamucil , Chingwa , Citracel , Mukaka weMagnesia , Dulcolax
Nezve indigestion kana chirungurira: Matumamu , Maalox , Mylanta , Pepcid
Yezvirwere zvembiriso: Monistat , Gynelotrimin
Nezvirwere kana kutonhora: Benadryl , Kushamiswa , Afrin nasal pfapfaidzo , Claritin , Robitussin DM , Vicks Formula 44, Horo madonhwe ekukosora
Nezve furuwenza: Tamiflu
Heano mimwe mibvunzo inowanzo bvunzwa isu takabvunza nyanzvi dzezvokurapa kuti vayedze mukati:
maitiro ekurapa nzara fungus nehydrogen peroxide
Unogona here kutora mishonga yekudzvinyirira kana uine pamuviri?
Unogona here kutora allergiki mushonga uine nhumbu?
Unogona here kurwara nefuru uchiri nepamuviri?
Iwe unogona sei kurapa kusvotwa mukuzvitakura?
Mishonga yekuwedzeredza-the-counter uye zvekuwedzera zvakachengeteka here?
Pakupedzisira, zvese zvaunoisa mumuviri wako zvinogona kukanganisa fetus yako; kunyangwe mishonga yekutengesa uye zvinowedzerwa zvepanyama — izvo zvekupedzisira zvisiri FDA zvakatemerwa kuchengetedzeka uye kugona — zvinogona kukonzera hurema hwekuzvarwa kana mamwe matambudziko ehutano kumwana mushure mehupenyu. Semuyenzaniso, madosi epamusoro easpirini panguva yekutanga trimester zvinogona kukonzera kuberekwa kusakwana uye kubva pamuviri. Pepto Bismol (bismuth subsalicylate) inofanirawo kuva kudziviswa panguva yekuzvitakura nekuti kugara uchiona chinhu chinoshanda salicylate kunogona kuva chepfu kumwana wako.
Izvi zvinoreva here kuti iwe unofanirwa kutsungirira kusagadzikana kwakajairika sekutemwa nemusoro kana kugumbuka mudumbu paunenge wakatakura mwana? Kwete hazvo.
Iyo munda wekuwedzera uye imwe nzira yekurapa inogona kukubatsira iwe paunenge uri nepamuviri, Dr. Merry vanotsanangura. Dzimwe nzira dzekuporesa, sekuzorora, hypnosis uye acupuncture, hazvizokanganisa mwana wako.
Dr. Gersh vanoratidzirawo mishoma mishonga yekuzvarwa yezvirwere zvakajairika zvepamuviri: Chirungurira chinogona kurerukirwa nekudzivirira chikafu chinokonzeresa senge michero yemuchero, madomasi, uye hanyanisi. Mukombe we ginger tii unogona kugadzirisa dzimwe nyaya dzekugaya. Musoro uye mutsipa kukwiza kunogona kudzikamisa kushushikana kwepanyama uye kwepamoyo. Uye kana iwe uine kusagadzikana, kuteerera kune yakatungamirwa kufungisisa kunogona kukubatsira kuzorora.
Zvese zviri kutaurwa, nhumbu yega yega yakasarudzika. Kana iwe uchinzwa kushoma pane zvaunogona-kune chero chikonzero - zviri nani kutaura nachiremba wako kuti aongorore mushonga upi wakakodzera kuti uve nepamuviri.
Ona makumi mashanu emishonga yakatemwa kwazvo muna 2020
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve hydrogen mweya bvunzo
kubhadhara muhomwe yekushanya kwachiremba
chii chekushandisa kune hutachiona hutachiona
nekukurumidza sei mushure mekunwa iwe unogona kutora ibuprofen
zvekuita kusvotwa nekurutsa
pfuti yeku depo inoitei kumahormone ako
Hutano Dzidzo, Hutano
Info Info, Nhau